Indonesia: Magaalooyin Loo Bedelaayo Xabaallo (Qubuurro) – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Indonesia: Magaalooyin Loo Bedelaayo Xabaallo (Qubuurro)
Dawladda Indonesia ayaa ku dhawaaqday in dadkii ku dhintay Tsunami-gii ka dhacay jasiiradda Sulawesi isbuucii hore ay gaadheen ku dhawaan 2000 oo qof, iyadoo la filayo in dhimashadu ay intaa ka sii kororto, maadaama aan weli lahayn kumaan qof oo meel ay jaan iyo cirib dhigeen aan la hayn.
Afhayeen u hadlay ciidanka gurmada oo la yiraahdo Mohamed Tohir, ayaa sheegay in la helay maydka 1944 qof oo ka tirsan dadkii magaalada Palu iyo ag-agaarkeeda ee dhulgarii 7.5 darajo gaarayaa uu ku dhuftay, oo ay u sii raacday hirar awood badan oo 28 cm gaaray.
Mas’uulkan oo la hadlay Wakaaladda Wararka AFP ayaa yidhi: “Tirada dadka dhimashada ah wey kordhi kartaa, maxaa yeelay; weli waxaan ku jirnaa howshii gurmadka aan ku baadi goobeynay dadka dhismayaasha burburkooda ku hoos jira.”
Waxaa laga cabsi qabaa in dhimashadu ay aad u kororto, 5 kun oo qof ayaa weli la la’yahay oo burburka dhismayaasha ku hoos jira. iyadoo aan la qabin yididiilo sidii u sii buuran in dad nool laga helo dhismayaasha hoostooda.
Dowladda Indonesia ayaa ku fakaraysa in laba deegaan oo u dhow magaalada Palu oo lakala yiraahdo Petuovo iyo Balaroa laga dhigo qubuuro, maadama ay dhulgariirkii ku baaba’een.
Waxaa intaa sii dheer deegaannada fogfog ee dhulgariirku ku dhuftay weli cidina si dhab ah ugama warhayso khasaaruhu inta uu le’eg yahay, waxaa helikobtarro lagu gaarsiiyay raashin iyo maacuun ay naftooda ku badbaadiyaan.
Previous articleKenya oo warbixin ka dhan ah Somalia u gudbisay dalal ka mid ah QM iyo Midowga Afrika
Next articleBooliska Ingiriiska Oo Soo Badbaadiyay Oday 40 Sano Ku Jiray Addoonsi Casri Ah